कर्णालीमा भ्रमण बर्षको रौनक ! (तस्विरहरु सहित) – HostKhabar ::
कर्णालीमा भ्रमण बर्षको रौनक ! (तस्विरहरु सहित)
सुर्खेत : देशभर अंग्रजी नयाँ बर्षको शुरुवात संगै नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० को औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ । करिव २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्य सहित संघीय सरकारको आजदेखि सुरु गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष कर्णाली प्रदेशमा पनि भव्य समारोहकाबीच सुरु गरिएको हो ।
पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउने आफ्नै नारा र लोगो सार्वजनिक गर्दै कर्णालीमा प्रदेशले आफ्नै नारा र लोगो बनाएको छ । कर्णाली प्रदेशले ‘यसपाली घुमौं कर्णाली’ नारा र कर्णालीका पर्यटकीय स्थलहरु समावेश गरेर छुट्टै लोगो बनाएको छ ।
सुर्खेतका गणेश आचार्यले तयार पारेको लोगोलाई प्रदेश सरकारले छनौट गरी सार्वजनिक गरेको हो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सुर्खेतको पर्यटकीय स्थल बुलबुलेबाट पर्यटन वर्षको उद्घाटन गरेका छन् ।
पर्यटन बर्ष उद्घाटनको शुभारम्भ कार्यक्रममा हेलिकप्टरबाट पुष्पगुच्छा छर्दै
पर्यटन वर्षको उद्घाटन समारोहलाई उत्साहित बनाउन नेपाली सेनाले हेलीकप्टरबाट कार्यक्रमस्थलमा पुष्पगुच्चाहरु खसालेको थियो । त्यस्तै पर्यटकीयनगरी वीरेन्द्रनगरको गोठीकाँडाबाट कार्यक्रमस्थलसम्म पारागलाइडिङ उडाइएको थियो । कर्णालीका दशवटै जिल्लाका पर्यटकीय गन्त्व्यहरुको रुपमा मुस्कान सहितको बेलुन समेत उडाइएको थियो ।
कर्णाली भ्रमणका लागि तय गरिएको लोगो ।
कर्णालीको मौलिख संस्कृति झल्कने विविध झाँकी सहित स्थानीय पिपलचौतारीबाट निकालिएको ¥याली बजार परिक्रमा गर्दै कार्यक्रमस्थल बुलबुलेमा पुगेको थियो । पर्यटन वर्षमा कर्णाली प्रदेशले एक लाख विदेश पर्यटक सहित ५ लाख पर्यटक कर्णालीमा भित्र्याउने उद्देश्य लिएको छ ।
झाँकिमा सहभागी युवाहरु
उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पर्यटनबाट नै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको बताए । कर्णाली नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने बताउँदै शाहीले भ्रमर्ण वर्षमा आउने पर्यटकबाट कमाउने भन्दा पनि प्रचार–प्रसारका रुपमा लिनुपर्ने बताए । प्राकृति रुपमा कर्णाली सुन्दर भएपनि भौगोलिक विकटताका कारण पर्यटकका कर्णाली प्रदेश चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाई थियो ।
# नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० # यसपालि घुमौं कर्णाली